Maaliif Adii Uffanna?
Kan hiike Barsiisaa Asaffaa Guddataa
Abbootiin keenya Kitaaba Qulqulluu fi hiika Afuuraa inni qabu bu’uura godhachuudhaan akka nuti balee (naxalaa) adii uffannu sirna nuuf hojjetaniiru.
1. Gooftaa Fakkenya Taasisuun
Gooftaan duukabu’oota Isaa keessaa duukabu’oota iccitii warra jedhaman Pheexiroos, Yohaannisii fi Yaa’iqoobiin fudhatee gara tulluu Taaboriti ba’ee osoo duukabu’oonni isaa isa ilaalanii uffatni isaa adii ta’ee ture; “Fuula isaani idurattis ni jijjiirame, fuulli isaas akka aduu ife uffanni isaas akka ifaa adi ita’e (Mat. 17:2). Nutis Gooftaa nu barsiisuufi fakkenya nuuf ta’uuf nama ta’e fakkenya godhannee balee adii uffannee gara mana Kiristaanaa ishee fakkenya Tulluu Taabor taatett iwalitti qabamna.
Mullata Yohaannis boqonnaa ja’a irratti waa’ee Qulqulloota warra jireenya lubbuu qofaan jiraatanii (samiiirra) kan harmaan gadii barreeffamee argama.
Read more: Maaliif Adii Uffanna?
Seensa deebii gaaffilee
1. Gaaffiin Maali?
Gaaffiin dhimma hin beekne tokko beekuuf ykn isa beeknu irratti hubannoo dabalataa argachuuf qaama waa’ee dhimma gaafatamu sana irratti beekumsa/hubanno cimaa qaban haala itti quunnamnu, deebiis haala itti argannu dha. Kana jechuun garuu kan gaafatu hundi wallaalaa (kan hin beekne), kan deebii deebisu hundis beekaadha jechuu miti; gama biraan ammo namni hundi kallattii maraan wal-qixa jechuus hin dandeenyu. Kanaafuu, waltajjiin gaaffiifi deebii kuni uummanni hedduun kan itti gaafatu, hayyoonni muraasni kan itti deebii kennan osoo hin taane akka muuxannoo wal-jijjiiruuti hubatamuu qaba.
Barnoota Amantaa keessatti gaheen ‘gaaffii fi deebii’ faayidaa adda durummaa hin qabu. Sababiinisaas namni Amantaa isaa sirriitti barate kan gaaffii isatti ta’u waan hin jirreef. Kanaafuu, calqaba, namni hundi waa’ee Amantaa isaa beekuuf (barachuufi dubbisuun) carraaquu qaba. Adeemsa sana keessa kan ifa hin taane, ibsa bal’aa barbaadu yoo jiraatemmoo waltajjiin akkanaa bu’aa guddaa qabu. Namni baratee/dubbisee gaafatu maal akka gaafatu/hanqina isaafi deebii akkamii akka eeggatu ni beeka; ‘namni rakkoo isaa sirriitti beeke furmaata walakkaa argateera’ jedhama mittiiree?
Read more: Seensa deebii gaaffilee